Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba zaseYurophu » I-WTM yaseLondon ivuliwe: Iyakhulula okanye iyoyikisa?
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • Ukwakha kwakhona • komzila Ngoku • Iindaba eziHlumayo zase-UK
I-World Travel Market ivuliwe; Ilizwe lezoKhenketho lidibana eLondon – kwaye yindibano eyonwabisayo ukuza kuthi ga ngoku.
Ngokutsho koqikelelo olukhutshwe yi-World Travel Market (WTM), ababonisi abavela kumazwe angaphezu kwe-100 baqinisekisile, kunye nabathengi abavela kumazwe angama-141 kunye nemimandla ukuya kumboniso wezorhwebo oqhubekayo eLondon (ngoNovemba 1-3).
Kwiiveki ezimbini ezidlulileyo, iWorld Tourism Network yabhenela kuReed, umququzeleli weWTM London, ukuba agunyazise imaski yobuso.
I-World Travel Market yathembisa ukhuseleko kubo bonke abathathi-nxaxheba yayiyeyona nto iphambili.
Kwiiveki ezimbini ezedlulileyo I-WTN ixelele eTurboNews kwaye yathumela kwiwebhusayithi yayo: "Sicebisa ngamandla ukuba unxibe imaski yobuso xa ukwindawo ezingaphakathi nabantu onokuthi uqhele ukuxubana nabo."
I-World Tourism Network yayibongoza i-WTM kwiiveki ezidlulileyo ukuba iqhubele phambili kwaye igunyazise ukunxitywa kwemaski kumntu wonke.
Namhlanje, iingcango kwiZiko leMiboniso ye-Excel eLondon zivulwe ngo-10: 00 ekuseni nge-1 kaNovemba. Ilizwe loKhenketho ukuze lihlangane, ukuxhawulana kwakhona, nokuwolana.
Iimaski zaziphantsi kwemfuno ephantsi kakhulu, kwaye phantse wonke umntu osebenza okanye ozimasa indawo, kubandakanya nabasebenzi bendawo yokutyela, akazange azame ukunxiba imaski.
Ngomhla woku-1 kuNovemba yayilusuku uRhulumente wamaNgesi ahlaziya ngalo iimfuno, ngokumangalisayo ngemini apho ezinye iingxelo zithi iibhedi zokhathalelo olunzima kwakhona phantse azifumaneki kwaye amanani e-COVID-19 ayenyuka.
Amatyala, iimeko ezisebenzayo, ukulaliswa esibhedlele, kunye namazinga okufa ayenyuka e-UK, kodwa iindawo zeminyhadala ezifana ne-Excel, imivalo, kunye neeklabhu zasebusuku zivuliwe kwaye abantu baziva bekhululekile.
Yayiyile mvakalelo yokukhulula eqhubeka kwiMarike yokuHamba yeHlabathi eLondon namhlanje. Ukuhamba kunye nokhenketho lusapho olukhulu, kwaye ubone iinyembezi, kwaye ukubanjwa kwabantu kwakubuyile xa abahlobo bakudala badibana kwakhona emva kweminyaka emi-2 yezithintelo ze-COVID.
I-WTM yajonga iirekhodi zokugonywa kuye wonke umntu ongena kwiziko lomboniso, kodwa ngaba oku kwanele? Uninzi lwezibhedlele ezintsha zibonakala ngathi zezabantu abagonywe ngokupheleleyo.
I-World Travel Market ithule, kukho iindawo ezininzi ezivulekileyo kunye neendawo zokuhlala, kwaye nangona ipakishwe xa ihambelana nekofu, ithetha ukuba abathathi-nxaxheba bakwazi ukusasazeka kwiiholo zemiboniso.
Abasebenzi - akukho maski
Obekekileyo. U-Edmund Bartlett ulungiselela udliwano-ndlebe no-CNN Richard Quest
Isicoci sesandla saseCosta ikofu asisebenzi
Inkomfa yeendaba yaseThailand
Uyilo lwendawo yokumisa lwaluluncinci, kodwa isithuba kwizitendi azange sitshintshe kakhulu. Bambalwa ababonisi kunye neendwendwe ezizayo. ISaudi Arabia ngokuqinisekileyo ibonise amandla ekuboniseni ukuma okumangalisayo ePavillion. ISaudi Arabia liqabane lomsitho osemthethweni weWTM.
Ukuba i-WTN inokubonisa kwiiveki ezimbini, akukho matyala matsha avelayo ngaphandle kwemaski, akukho mgaqo-nkqubo wokuncitshiswa kwentlalontle, oko kuya kuthetha isahluko esitsha seziganeko ezizayo e-Bhritane kwaye intlanganiso kunye neshishini lenkuthazo kwenye indawo yasekwa.
eTurboNews izakubonisa aIMEX eMelika, iNtlanganiso kunye neNkuthazo yoMboniso yoRhwebo eLas Vegas ngoNovemba 8-11.
eTurboNews ikwayi- iqabane elisemthethweni leendaba yeWorld Travel Market yaseLondon.